Ungancintisana kuGoogle neBusiness Big? | Martech Zone
Ngaphambi kokuthi ungicasukele ngale ndatshana, ngicela uyifunde kahle. Angisho ukuthi iGoogle akuyona insiza yokutholwa emangalisayo noma ukuthi ayikho imbuyiselo yokumaketha ekutshalweni kwemali kumasu akhokhelwayo noma wokucinga ngezinto eziphilayo. Iphuzu lami kule ndatshana ukuthi ibhizinisi elikhulu libusa ngokuphelele imiphumela yokucinga ephilayo futhi ekhokhelwayo.
Besihlala sazi ukuthi ukukhokha ngokuchofoza ngakunye bekuyisiteshi lapho imali ibusa khona, kuyindlela yebhizinisi. Ukubekwa kuzohlala njalo kuya kumthengi ophakeme kunabo bonke. Kepha amasu wokusesha we-organic ayehluke kakhulu. Sekuyiminyaka, sikwazile ukukhiqiza okuqukethwe okufanele futhi okumangazayo futhi siklonyeliswe nge Inombolo 1 ibala igama elingukhiye elincintisana kakhulu kuGoogle. Sezihambile lezo zinsuku.
Umngani omuhle u-Adam Small ugijimela a ipulatifomu yokumaketha ingcebo. Wayesanda kuba seNew York City e I-Inman Connect. URand Fishkin waseMoz wayeyisikhulumi futhi waveza ekuhlaziyweni kwakhe ukuthi izizinda ezi-5 zibekwe ezingeni eliphezulu lokuseshwa kwezindlu ezi-5 ezimakethe eziphezulu ezingama-25 e-United States
Ngamanye amagama, uma uyinkampani ye-real estate unolwazi lweminyaka eyikhulu kwelinye lalawo madolobha, amathuba akho okuba sezingeni ayesabeka. Akuzange kusetshenziselwe ukuba kanjena. Izilinganiso ze-organic search ze-Google bezisebenzisa ithuba lokuba noma yiliphi ibhizinisi ukuthuthukisa okuqukethwe okumangazayo futhi kutholakale futhi kubekwe kahle. Angisho ukuthi kwakungelula, kwakuthatha ithani lomsebenzi… kepha kungenzeka.
I-SimilarWeb ishicilele i- Ama-Momentum Awards ka-2016. Ama-SimilarWeb Momentum Awards aqaphela amawebhusayithi ase-US akhombise ukuthuthuka okuhlukile esigabeni sabo esiku-inthanethi ngo-2016. Abaphumelele abangama-39 ezigabeni eziyi-13 bakuthuthukise ngempumelelo Izinga leWebhu elifanayo - amaphuzu e-algorithmic ahlela ngaphezu kwamasayithi ayizigidi ezingama-80 ngamathrikhi wawo wonke wokuzibandakanya nokuzibandakanya.
Ngaphakathi kokuhlaziywa kwalokhu, uzothola ukuthi usesho luyisici esikhulu esinquma izinkampani ezinomfutho omkhulu. Naba abaphumelele imiklomelo yabo:
Isigaba 1st 2nd 3rd
Izindawo Zokuthengisa Eziku-inthanethi izifiso.com amadams.com kmart.com
Consumer Electronics frys.com bestbuy.com bbdibmabundu.com
Isembatho rue21.com ovoriasotto.com amaphutha.com
Ama-ejensi wokuhamba nge-inthanethi imvu-shop.com travelocity.com expedia.com
Amaketanga Ehhotela marriott.com khubeeweb.in ihg.com
Izinsizakalo Zokubhuka Kwehhotela hot.com airbnb.com trivago.com
Airlines zinhle.com aa.com umoya.com
Insurance zombie.com progressive.com geico.com
Banking citi.com izifunda.com lindokuhle.biz
Ukuthenga Izimoto carmax.com autotrader.com izimoto.com
Izindaba neMidiya amashanku.net imvucomputers.cn ezepolitiki.com
I-Tech News ccm.net izindaba.ycombinator.com digitaltrends.com
Izindaba Zebhizinisi bloomberg.com imali.cnn.com omnilo.nl
Landa i-SimilarWeb's Highlight Report ka-2016
Ngenkathi kunezinkampani ezimbalwa ezingabusi umhlaba, yizinkampani ezinkulu ezinamaphakethe ajulile aphethe ukumaketha kwedijithali online, eholwa amazinga abo okusesha okuphilayo. Lezi zinkampani zingakwazi ukukhokhela amasu wesiteshi se-omni, kufaka phakathi okuqukethwe okunamandla okuhambisana nokukhushulwa okukhokhelwayo okukhulu, amawebhusayithi athuthukiswe kakhulu, kanye nokumaketha okuthonya. Lokho kuhlanganiswa kuyabiza - kepha kuqeda ukuncintisana.
Kungakho izinkampani ezincane nabashicileli kufanele basebenzise ubuhlakani babo ukuze kuzuze bona. Njengoba ubheka ezinkampanini eziphethe iGoogle, akufanele uzilingise. Udinga ukuzihlukanisa nabo, noma ubheka ukwenza imikhankaso enamasu wokuqukethwe abengeke abeke engcupheni yawo. Izithameli zakho zisalambele okuhlukile - ungahluka kanjani? Uma ungeke ukwazi ukukleliswa ngaphezu komncintiswano wakwa-Google, okungenani usengathembela kwezenhlalo ukukhulisa umlayezo wakho.
Kungakho isu eliwumgogodla lamakhasimende ethu liqhubeka nokuba ngucwaningo nentuthuko ye i-infographics, ihluzo ezikhulunywayo, Futhi amaphepha amhlophe. Ucezu lokuqukethwe olucwaningwe kahle, oluhle, futhi olubalulekile luzoqhubeka nokuqhubela phambili ukunaka negunya enkampanini yakho. Ungahle ungabi sezingeni, kepha uzokwabiwa futhi utholwe yizethameli ezifanele ozifunayo.
Tags: 2016isosi yomenzeliGoogle +indodaimiklomelo yomfuthomozukusesha okuphilayoukusesha okukhokhelweirandi lesikhumba senhlanziusezingeniukumakethwa kwezindluefanayo
I-SEO Iceberg: Zula Izinto Ezifihlekile Ezithinta Ukucinga Okungokwemvelo
I-2017 Web Design and Trends Experience Trends